Vadzidzi vanogadzira kit neArduino kugadzira emagetsi mawiricheya | Mahara emahara
Vadzidzi vanogadzira kit ine Arduino kugadzira emagetsi mawiricheya
Kwemwedzi yakati wandei, zvikwata zvinoverengeka uye vashandisi vevagadziri vanga vachitsvaga nekuvandudza magadzirirwo emacheya emagetsi neFree Hardware kuitira kuti chishongedzo ichi, kune vakawanda vakakosha, chimwe chinhu chiri nyore kuwana uye chisina kudhura sezvazviri kuitika parizvino.
Boka revadzidzi rakadana steampunk1577 yakwanisa kugadzira kit ine Arduino iyo inoshandura yakajairika wiricheya muwiricheya yemagetsi, chimwe chinhu chinonyanya kubatsira kune avo vasingakwanise kuwana urwu rudzi rwezvishongedzo.
Boka revadzidzi rakagadzira kititi inogona kusungirirwa kune chero chewiricheya uye ichichichinja kuita wiricheya yemagetsi. Zvese zve 500 madhora, mutengo unodhura kupfuura mawiricheya echokwadi emagetsi, kunyangwe zvichidhura kupfuura kana tikazvivaka pachedu
Iyo mota mune ino kit inodhindwa kuti igadzire yakareruka mawiricheya emagetsi
Iyi kit yakavakirwa pa ndiro Arduino UNO iyo inodzora uye inoita mafambiro ekufambisa atinopa. Zvadaro, Arduino UNO Nekuda kwesimba rebhatiri, inofambisa mota dzakadhindwa dzatinoisa muwiricheya. Idzi mota dzinodhindwa senge dzese dzeMahara Hardware zvinhu uye zvishandiso zvinogadzira kititi izvi zvinogona kuwanikwa zvakasiyana kune avo vanogonesa uye vanoda kuzvivaka ivo pachavo. Zvese kit uye neruzivo rwese nezve ichi Arduino kit inogona kuwanikwa kuburikidza ne Steampunk1577 yepamutemo webhusaiti.
Imwe yemabhenefiti kana mapoinzi akanaka eFree Hardware ndeye mashandisiro ayo muzvinhu zvezuva nezuva kana zvakakosha izvo zvinowanzo kuve nemutengo wepamusoro kwazvo asi zvinogona kuvakwa nemutengo wakaderera. Wiricheya yemagetsi uyu muenzaniso wakanaka asi kune zvimwe zvakaita sekure kure kure kumeso kwekumeso, zvimedu zvakaprindwa, nezvimwe ... Chinhu chinobatsira vanhu vazhinji, kunyangwe isu tisingazvizive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Vadzidzi vanogadzira kit ine Arduino kugadzira emagetsi mawiricheya
Alfredo Rodriguez Couto akadaro
Sei uye kupi iwe kwaunogona kutenga. Ndinofanira kuzviisa ini pachangu here? Inogona here kuiswa pane yekumonera wiricheya?
Ndinogara muOrense, SPAIN.
Pindura kuna Alfredo Rodriguez Couto
Iyo hombe 3D printer muEurope ichagadzirwa muVigo
RaspiReader, muverengi weminwe uyo anoshandisa Raspberry Pi 3